भगवान को राज्य - भगवान स्विट्जरल्याण्ड को विश्वव्यापी चर्च
हाम्रो बारे > WKG लाई विश्वास गर्नुहोस् > परमेश्वरको राज्य
परमेश्वरको राज्य, व्यापक अर्थमा, परमेश्वरको सार्वभौमिकता हो। परमेश्वरको शासन पहिले नै चर्च मा र हरेक बिश्वास गर्ने को जीवन मा स्पष्ट छ जो उहाँको इच्छा को अधीनमा छ। परमेश्वरको राज्य ख्रीष्टको दोस्रो आगमन पछि एक विश्व व्यवस्था को रूप मा पुरा तरिकाले स्थापित हुनेछ, जब सबै चीजहरु यसको अधीनमा हुनेछन्। (भजन २: -2,6-;;: ३: १-२; लूका १:: २०-२१; दानियल २:४४; मार्क १: १४-१५; १ कोरिन्थी १५: २४-२9; प्रकाश ११:१५; ३/२१/ २२ -२;; २२.१-५)
परमेश्वरको वर्तमान र भविष्यको राज्य
पश्चाताप गर्नुहोस्, किनकि स्वर्गको राज्य हातमा छ! " बप्तिस्मा दिने यूहन्ना र येशूले परमेश्वरको राज्यको निकटताको घोषणा गर्नुभयो (मत्ती ३: २; ४:१;; मार्क १:१५)। भगवान को लामो प्रतीक्षा शासन शासन हात मा थियो। त्यो सन्देशलाई सुसमाचार भनियो, सुसमाचार। जोन र येशूको यो सन्देश सुन्न र प्रतिक्रिया दिन हजारौं उत्सुक थिए।
तर एकछिन सोच्नुहोस् कि यस्तो प्रतिक्रिया कस्तो हुने थियो यदि तपाईंले प्रचार गर्नुभयो भने: "परमेश्वरको राज्य अझै २,००० वर्ष टाढा छ।" सन्देश निराशाजनक हुनेछ र सार्वजनिक प्रतिक्रिया पनि निराश हुने थियो। येशू लोकप्रिय हुन सक्नुहुन्न, धार्मिक नेताहरू डाह गर्दैनन्, र येशूलाई क्रूसमा टाँगिएको थिएन होला। "परमेश्वरको राज्य टाढा छ" कुनै नयाँ समाचार वा राम्रो कुरा हुने थिएन।
यूहन्ना र येशूले परमेश्वरको आउँदै गरेको राज्यको प्रचार गर्नुभयो, जुन तिनीहरूको श्रोताको नजिक थियो। सन्देशले अब के गर्ने भनेर केही बताएको छ; यो तत्काल प्रासंगिकता र जरुरीताको थियो। यो चासो जगायो - र ईर्ष्या। सरकारी र धार्मिक शिक्षामा परिवर्तन आवश्यक छ भनेर घोषणा गरेर दूतावासले यथास्थितिलाई चुनौती दियो।
प्रथम शताब्दीमा यहूदीहरूको आशा
प्रथम शताब्दीमा बस्ने थुप्रै यहूदीहरूलाई "परमेश्वरको राज्य" भन्ने शब्द थाहा थियो। उनीहरूले भगवान्लाई एउटा यस्तो नेता पठाउने आशा गरेका थिए जुन रोमी शासनलाई त्यागेर यहूदियालाई स्वतन्त्र राष्ट्रमा पुनर्स्थापित गर्नेछ - न्याय, महिमा र आशिषको देश, सबैमा आकर्षित हुने एउटा जाति।
यस वातावरण मा - ईश्वर द्वारा नियुक्त हस्तक्षेप को उत्सुक तर अस्पष्ट अपेक्षाहरु - येशू र जोनले परमेश्वरको राज्यको निकटताको प्रचार गर्नुभयो। "परमेश्वरको राज्य नजिकै छ" येशूले आफ्ना चेलाहरुलाई बिरामी लाई निको पारे पछि भन्नुभयो (मत्ती १०:;; लूका १::,, ११)।
तर आशा गरिएको साम्राज्य पूरा भएन। यहूदी राष्ट्र पुनर्स्थापित भएको थिएन। त्योभन्दा पनि नराम्रो कुरा, मन्दिरलाई ध्वस्त पारियो र यहूदीहरू छरिए। यहूदी आशा अझै अपूर्ण छन्। के येशू आफ्नो भनाइमा गलत हुनुहुन्थ्यो कि उनले एक राष्ट्रिय राज्यको भविष्यवाणी गर्नुभएन?
येशूको राज्य लोकप्रिय अपेक्षा जस्तै थिएन - हामी यो तथ्य बाट अनुमान लगाउन सक्छौं कि धेरै यहूदीहरु उहाँलाई मृत देख्न मन पराउँछन्। उहाँको राज्य यस संसारबाट बाहिर थियो (यूहन्ना १::३)। जब उहाँ पार आउनुभयो
"परमेश्वरको राज्य" बोल्दै, उनले अभिव्यक्तिहरु को उपयोग गरे कि मानिसहरु लाई राम्रो संग बुझे, तर उनीहरुलाई नयाँ अर्थ दिए। उनले निकोदेमसलाई भने कि भगवान को राज्य धेरै मानिसहरु को लागी अदृश्य थियो (जोन ३: ३) - यो बुझ्न वा अनुभव गर्न को लागी, एक भगवान को पवित्र आत्मा (v।)) द्वारा नवीकरण हुनु पर्छ। परमेश्वरको राज्य एक आध्यात्मिक राज्य थियो, एक भौतिक संगठन होइन।
साम्राज्यको हालको अवस्था
जैतून को पर्वत मा भविष्यवाणी, येशू घोषणा गर्नुभयो कि परमेश्वरको राज्य केहि संकेत र भविष्यसूचक घटनाहरु पछि आउनेछ। तर येशूका केही शिक्षा र दृष्टान्तहरु भन्छन् कि परमेश्वरको राज्य नाटकीय ढंगले आउँदैन। बीउ चुपचाप हुर्कन्छ (मार्क ४: २-4,26-२); राज्य एक सरसों को बीउ को रूप मा सानो शुरू हुन्छ (v। 29-30) र खमीर जस्तै लुकेको छ (मत्ती 32:13,33)। यी दृष्टान्तहरु सुझाव दिन्छन् कि भगवान को राज्य एक वास्तविकता हो यो भन्दा पहिले यो एक शक्तिशाली र नाटकीय तरीका मा आउँछ। तथ्य यो हो कि यो एक भविष्य वास्तविकता हो, यो पहिले नै एक वास्तविकता हो।
आउनुहोस्, हामी केही पदहरू विचार गरौं जसले परमेश्वरको राज्यले काम गरिरहेको छ भनेर देखाउँछ। मर्कूस १:१:1,15 मा येशूले घोषणा गर्नुभयो: "समय पूरा भएको छ ... परमेश्वरको राज्य आएको छ।" दुबै क्रियाहरू विगत कालमा छन्, जसले केहि भएको छ भनेर संकेत गर्छ र यसको नतिजा जारी छ। समय घोषणाको लागि मात्र नभई परमेश्वरको राज्यको लागि पनि आएको थियो।
भूतहरु बाहिर निकाली सके पछि, येशूले भन्नुभयो: "यदि मैले परमेश्वरको आत्माले दुष्ट आत्माहरुलाई निकालेँ भने, परमेश्वरको राज्य तिमीहरुकहाँ आएको छ" (मत्ती १२: २; लूका ११:२०)। राज्य यहाँ छ, उनले भने, र प्रमाण दुष्ट आत्माहरु को कास्टिंग मा निहित छ। यो प्रमाण आज मण्डली मा जारी छ किनकि चर्चले येशू भन्दा धेरै ठूलो कामहरु गरिरहेको छ (यूहन्ना १४:१२)। हामी यो पनि भन्न सक्छौं: "यदि हामी परमेश्वरको आत्माद्वारा दुष्ट आत्माहरुलाई बाहिर निकाल्छौं, तब परमेश्वरको राज्य यहाँ र आज काम गर्दछ।" परमेश्वरको आत्मा को माध्यम बाट, भगवान को राज्य शैतान को राज्य मा आफ्नो कमान्ड शक्ति प्रदर्शन गर्न जारी छ।
शैतान अझै पनी एक प्रभाव exerts, तर उनी पराजित र निन्दा गरिएको छ (जॉन १::११)। यो आंशिक रूपमा प्रतिबन्धित थियो (मार्क ३:२))। येशूले शैतानको संसारलाई परास्त गर्नुभयो (यूहन्ना १::३३) र परमेश्वरको मद्दतले हामी पनि यसलाई जित्न सक्छौं (१ यूहन्ना ५: ४)। तर सबैले यसलाई पराजित गर्दैनन्। यस युगमा भगवान को राज्य मा राम्रो र नराम्रो दुबै समावेश छ (मत्ती १३: २४-३०। ३-16,11-४३। ४--५०; २४.४५-५१; २५.१२-१४. १४-३०)। शैतान अझै प्रभावशाली छ। हामी अझै पनी भगवान को राज्य को गौरवशाली भविष्य को प्रतीक्षा।
परमेश्वरको राज्य, शिक्षण मा स्पष्ट छ
"स्वर्गको राज्य आज सम्म हिंसा भोग्छ र हिंसकले यसलाई कब्जा गर्दछ" (मत्ती ११:१२)। यी क्रियाहरु वर्तमान काल मा छन् - भगवान को राज्य येशू को समय मा अस्तित्वमा थियो। एक समानांतर मार्ग, लूका १::१, ले वर्तमान काल मा क्रियाहरु को उपयोग गर्दछ: "... हामीलाई थाहा छैन कि यी हिंसक मानिसहरु को हुन् वा उनीहरु हिंसा को उपयोग किन गर्छन् - यहाँ के मायने छ कि यी पदहरु एक वर्तमान वास्तविकता को रूप मा भगवान को राज्य को बारे मा बोल्छन्।
लूका १:16,16:१ पदको पहिलो भागको ठाउँमा "... परमेश्वरको राज्यको सुसमाचार प्रचार गरिएको छ"। यस भिन्नताले सुझाव दिन्छ कि यस युगमा राज्यको प्रगति, व्यावहारिक हिसाबले, यसको प्रचारको लागि लगभग बराबर छ। परमेश्वरको राज्य छ - यो पहिले नै अवस्थित छ - र यो यसको घोषणा को माध्यम बाट प्रगति।
मर्कूस १०:१:10,15 मा, येशूले औंल्याए कि परमेश्वरको राज्य भनेको हामीले यस जीवनमा कुनै न कुनै रूपमा प्राप्त गर्नुपर्दछ। परमेश्वरको राज्य कसरी छ? विवरणहरू अझै स्पष्ट छैनन्, तर हामीले हेरेका पदहरूले यो अहिलेको हो भन्दछ।
हामी बीचमा परमेश्वरको राज्य छ
केही फरिसीहरूले येशूलाई सोधे कि परमेश्वरको राज्य कहिले आउँछ (लूका १::२०)। तिमीले देख्न सक्दैनौ, येशूले जवाफ दिनुभयो। तर येशूले यो पनि भन्नुभयो: God परमेश्वरको राज्य तिमी भित्र छ [a। । तिमीहरु बीच] »(लूका 17,20:17,21)। येशू राजा हुनुहुन्थ्यो, र किनभने उनीहरुले उनीहरुका बीचमा चमत्कार सिकाए र काम गरे, राज्य फरिसीहरु बीच थियो। येशू आज हामी मा पनि हुनुहुन्छ, र जसरी परमेश्वरको राज्य येशू को सेवकाई मा उपस्थित थियो, त्यसोभए यो उनको चर्च को सेवा मा उपस्थित छ। राजा हाम्रो बीचमा हुनुहुन्छ; उहाँको आध्यात्मिक शक्ति हामी मा छ, भले पनि परमेश्वरको राज्य अझै सम्म आफ्नो सबै शक्ति मा संचालित छैन।
हामी पहिले नै परमेश्वरको राज्यमा हस्तान्तरण गरिएका छौं (कलस्सी १:१३)। हामी पहिले नै एक राज्य प्राप्त गरीरहेका छौं, र यसको सही जवाफ श्रद्धा र भय हो (हिब्रू १२:२1,13)। ख्रीष्टले "हामीलाई [भूतकालमा] पुजारीहरुको राज्य बनाउनुभयो" (प्रकाश १:))। हामी एक पवित्र जनता हौं - अहिले र वर्तमान - तर यो अझै पनी प्रकट भएको छैन हामी के हुनेछौं। परमेश्वरले हामीलाई पापको शासनबाट स्वतन्त्र बनाउनुभएको छ र उहाँको राज्यमा उहाँको शासन गर्ने अधिकार अन्तर्गत राख्नुभएको छ।
परमेश्वरको राज्य यहाँ छ, येशूले भन्नुभयो। उनका श्रोताहरूले एक विजयी मसीहको लागि पर्खनु पर्दैनथ्यो - भगवानले शासन गरिसक्नुभएको छ र हामीले अब उहाँको तरिकामा जिउनु पर्छ। हामीसँग अहिलेसम्म कुनै इलाका छैन, तर हामी परमेश्वरको शासनको अधीनमा छौं।
परमेश्वरको राज्य भविष्यमा अझै छ
बुझ्दैछ कि परमेश्वरको राज्य पहिले नै अवस्थित छ हामीलाई हाम्रो वरपर अन्य मानिसहरुको सेवा गर्न को लागी अधिक ध्यान दिन मद्दत गर्दछ। तर हामी यो भुल्न सक्दैनौं कि परमेश्वरको राज्य को समापन भविष्य मा अझै पनी छ। यदि हाम्रो आशा मात्र यो युग मा छ, हामी धेरै आशा छैन (१ कोरिन्थी १५: १ 1)। हामीसंग भ्रम छैन कि भगवानको राज्य छ
बारे मा ल्याउन क्रिम्पिंग प्रयासहरू। जब हामी अवरोध र सतावट भोग्छौं, जब हामी प्रायः मानिसहरूले सुसमाचारलाई अस्वीकार गरेको देख्छौं, राज्यको पूर्णता भविष्यको युगमा छ भनेर जानेर बल प्राप्त हुन्छ।
हामीले परमेश्वर र उहाँको राज्यलाई प्रतिबिम्बित गर्ने तरिकामा जीवन बिताउन जतिसुकै प्रयास गरे पनि हामी यस संसारलाई परमेश्वरको राज्यमा परिणत गर्न सक्दैनौं। यो एक नाटकीय हस्तक्षेप को माध्यम बाट आउनु पर्छ। Apocalyptic घटनाहरू नयाँ युगमा प्रवेश गर्न आवश्यक छ।
धेरै पदहरूले हामीलाई बताउँछन् कि परमेश्वरको राज्य एक गौरवशाली भविष्य वास्तविकता हुनेछ। हामी जान्दछौं कि ख्रीष्ट एक राजा हुनुहुन्छ र हामी त्यो दिन को लागी चाहान्छौं जब उहाँ महान र नाटकीय तरीकाले मानव दु: खको अन्त्य गर्न आफ्नो शक्ति को उपयोग गर्नुहुनेछ। दानियलको पुस्तकले परमेश्वरको राज्यको भविष्यवाणी गर्दछ जुन सम्पूर्ण पृथ्वीमा शासन गर्दछ (दानियल २:४४;:: १३-१४.२२)। प्रकाश को नयाँ नियम को पुस्तक उनको आगमन को वर्णन गर्दछ (प्रकाश ११:१५; १:: ११-१2,44)।
हामी प्रार्थना गर्छौं कि राज्य आओस् (लूका ११: २)। आत्मा मा गरीब र सताइएकाहरु आफ्नो भविष्य "स्वर्ग मा पुरस्कार" पर्खिरहेका छन् (मत्ती ५: ३, १०, १२)। मानिसहरु भविष्यको "न्याय" को दिन मा भगवान को राज्य मा प्रवेश गर्नेछन् (मत्ती 11,2: 5,3.10.12-7,21; लूका 23: 13,22-30)। येशूले एउटा दृष्टान्त साझा गर्नुभयो किनकि कोहि विश्वास गर्छन् कि परमेश्वरको राज्य सत्तामा आउँदैछ (लूका १:: ११)।
जैतुनको डाँडाको भविष्यवाणीमा, येशूले शक्ति र महिमामा फर्कनु भन्दा पहिले हुने नाटकीय घटनाहरुको वर्णन गर्नुभयो। उहाँको क्रुसमा टाँग्नु भन्दा पहिले, येशूले भविष्यको राज्यको प्रतीक्षा गर्नुभयो (मत्ती २:: २)।
पावल भविष्य को अनुभव को रूप मा "राज्य को विरासत" को धेरै पटक बोल्छन् (१ कोरिन्थी:: -1 -१०;
१..15,50०; गलाती 5,21.२१; एफिसी .5,5..) र अर्कोतर्फ उसले गर्छ कि आफ्नो भाषा मार्फत स indicates्केत गर्दछ
परमेश्वरको राज्यलाई केहि चीजको रूपमा हेरिएको छ जुन केवल युगको अन्त्यमा साकार हुनेछ (२ थेस्सलोनिकी २:१२; २ थ
१.५; कलस्सी ४:११; २ तिमोथी ४: १, १))। राज्य को वर्तमान अभिव्यक्ति मा ध्यान केन्द्रित मा, पावल या त "भगवान को राज्य" (रोमी १४:१)) संग शब्द "धार्मिकता" परिचय गर्न को लागी वा यसको सट्टामा प्रयोग गर्न को लागी (रोमी १:१))। मत्ती ::३३ परमेश्वरको राज्यको परमेश्वरको धार्मिकता संग घनिष्ठ सम्बन्ध को लागी हेर्नुहोस्। वा (वैकल्पिक रूपमा) पावल परमेश्वर पिता को तुलनामा राज्यलाई ख्रीष्ट संग जोड्ने गर्दछन् (कलस्सी १:१३)। (जे। रामसे माइकल्स, "भगवान को राज्य र ऐतिहासिक येशू", अध्याय 1,5, 4,11 औं शताब्दी व्याख्या मा भगवान को राज्य, Wendell विलिस द्वारा संपादित [Hendrickson, 2], पृष्ठ 4,1.18)।
धेरै "भगवान को राज्य" शास्त्रहरु वर्तमान राज्य को लागी साथै यसको भविष्य को पूर्ति को लागी लागू हुन सक्छ। कानुन तोड्नेहरुलाई स्वर्गको राज्यमा सबैभन्दा कम स्वर्गमा भनिनेछ (मत्ती ५: १ -5,19 -२०)। हामी परमेश्वरको राज्यको खातिर परिवारहरु छोड्छौं (लूका १:: २)। हामी कष्टको माध्यमबाट परमेश्वरको राज्यमा प्रवेश गर्छौं (प्रेरित १४:२२)। यस लेखमा सबैभन्दा महत्त्वपूर्ण कुरा यो हो कि केहि पदहरु वर्तमान काल मा स्पष्ट गरी रहेका छन् र केहि स्पष्ट रूप मा भविष्य काल मा लेखिएका छन्।
येशूको पुनरुत्थान पछि, चेलाहरूले उहाँलाई सोधे: "प्रभु, के तपाइँ यस समयमा फेरि इस्राएल को लागी राज्य स्थापित गर्नुहुनेछ?" (प्रेरित १:))। येशूले कसरी यस्तो प्रश्नको जवाफ दिनुभएको थियो? "राज्य" बाट चेलाहरुको मतलब के थियो येशूले सिकाउनु भएको थिएन। चेलाहरु अझै पनि एक राष्ट्रिय राज्य को सट्टा बिस्तारै बिस्तारै सबै जातीय समूहहरु बाट बनेका मानिसहरु को सट्टा मा सोच्यो। यो उनीहरुलाई धेरै वर्ष लाग्यो कि अन्यजातिहरुलाई नयाँ राज्य मा स्वागत छ। ख्रीष्टको राज्य अझै यस संसारबाट बाहिर थियो, तर यो युगमा सक्रिय हुनुपर्दछ। तेसैले येशूले हो वा होइन भन्नुभएन - उहाँ मात्र उनीहरुलाई भन्दै हुनुहुन्थ्यो कि त्यहाँ उनीहरुको लागि काम छ र त्यो काम गर्ने शक्ति छ (vv। 1,6-7)।
विगतमा परमेश्वरको राज्य
मत्ती २:25,34: हामीलाई बताउँछ कि संसारको उत्पत्तिदेखि नै परमेश्वरको राज्यको तयारी भइरहेको छ। यो विभिन्न समयहरूमा भए पनि, सबै समयमा अस्तित्वमा थियो। परमेश्वर आदम र हवाको लागि राजा हुनुहुन्थ्यो; उहाँले तिनीहरूलाई शासन गर्ने अधिकार र अधिकार दिनुभयो; तिनीहरू अदनको बगैंचामा तिनका उप-शासकहरू थिए। यद्यपि "राज्य" शब्द प्रयोग भएको छैन, आदम र हव्वा परमेश्वरको राज्यमा थिए - उनको शासन र सम्पत्ती अन्तर्गत।
जब परमेश्वरले अब्राहामलाई प्रतिज्ञा गर्नुभयो कि उनका सन्तानहरु महान मानिसहरु बन्नेछन् र राजाहरु उनीहरु बाट आउनेछन् (उत्पत्ति १:: ५--1), उहाँले उनीहरुलाई परमेश्वरको राज्यको प्रतिज्ञा गर्नुभयो। तर यो सानो बाट शुरू भयो, एक ब्याटर मा खमीर जस्तै, र यो प्रतिज्ञा हेर्न सयौं बर्ष लाग्यो।
जब परमेश्वरले इस्राएलीहरुलाई मिश्र बाट बाहिर ल्याउनु भयो र उनीहरु संग एउटा करार बनाउनु भयो, उनीहरु पुजारीहरुको राज्य बन्नुभयो (प्रस्थान १::)), एक राज्य जुन परमेश्वरको हो र परमेश्वरको राज्य भन्न सकिन्छ। उहाँले उनीहरु संग गर्नुभएको करार सन्धि जस्तै थियो कि शक्तिशाली राजाहरु साना राष्ट्रहरु संग बनाइयो। उहाँले तिनीहरूलाई बचाउनुभएको थियो, र इस्राएलीहरूले जवाफ दिए - उनीहरु उहाँका मानिसहरु बन्न सहमत भए। भगवान उनीहरुका राजा हुनुहुन्थ्यो (१ शमूएल १२:१२;::))। दाऊद र सुलेमान परमेश्वरको सिंहासनमा बसे र उनको नाममा शासन गरे (१ चिर २:: २३)। इजरायल परमेश्वरको राज्य थियो।
तर मानिसहरूले आफ्ना परमेश्वरको आज्ञा पालन गरेनन्। भगवानले उनीहरुलाई पठाइदिनुभयो, तर उहाँले राष्ट्रलाई नयाँ हृदय (यर्मिया ३१: ३१-३३) संग पुनर्स्थापना गर्ने प्रतिज्ञा गर्नुभयो, जुन भविष्यवाणी आज चर्चमा पूरा भयो जुन नयाँ करारमा बाँडिन्छ। हामी जसलाई पवित्र आत्मा दिइएको छ शाही पुजारी र पवित्र राष्ट्र हो, जुन प्राचीन इजरायलले गर्न सकेनन् (१ पत्रुस २:;; प्रस्थान १::))। हामी परमेश्वरको राज्यमा छौं, तर त्यहाँ अन्नको बिचमा झारपात बढेको छ। युगको अन्त्यमा, मसीह शक्ति र महिमा मा फर्किनुहुनेछ, र परमेश्वरको राज्य फेरी देखाई मा परिवर्तन हुनेछ। सहस्राब्दी को अनुसरण गर्ने राज्य, जसमा सबैजना सिद्ध र आध्यात्मिक छन्, सहस्राब्दी बाट एकदम फरक हुनेछ।
राज्य को ऐतिहासिक निरन्तरता भएको हुनाले, यो भूत, वर्तमान, र भविष्य काल को सन्दर्भ मा यसको बारेमा कुरा गर्न को लागी सही छ। यसको ऐतिहासिक विकास मा यो थियो र नयाँ चरणहरु heralded छन् को रूप मा प्रमुख माइलस्टोन को लागी जारी रहनेछ। साम्राज्य माउन्ट सिनाई मा स्थापित भएको थियो; यो येशू को काम मा र को माध्यम बाट स्थापित भएको थियो; यो निर्णय पछि, यसको फिर्ता मा स्थापित गरिनेछ। प्रत्येक चरणमा, परमेश्वरका जनहरु उनीहरुसंग जे छ त्यसमा रमाउनेछन् र उनीहरु आउने दिनहरुमा अझ खुशी हुनेछन्। हामी अब भगवान को राज्य को केहि सीमित पक्षहरु को अनुभव को रूप मा, हामी भगवान को भविष्य को राज्य पनि एक वास्तविकता हुनेछ भन्ने विश्वास पाउँछौं। पवित्र आत्मा हाम्रो आशीर्वाद को ग्यारेन्टी हो (२ कोरिन्थी ५: ५; एफिसी १:१४)।
भगवान र सुसमाचारको राज्य
जब हामी शब्द राज्य वा राज्य सुन्छौं, हामी यस संसारको राज्यको सम्झना दिलाउँछौं। यस संसारमा, राज्य अधिकार र शक्ति संग सम्बन्धित छ, तर सद्भाव र प्रेम होइन। राज्यले परमेश्वर आफ्नो परिवारमा अख्तियारको वर्णन गर्न सक्नुहुन्छ तर यसले परमेश्वरले हाम्रोलागि राख्नुभएको सबै आशिष्‌हरूको वर्णन गर्दैन। यसैले अन्य छविहरू प्रयोग गरिन्छ, जस्तै पारिवारिक पदावली बच्चाहरू, जसले परमेश्वरको प्रेम र अधिकारलाई जोड दिन्छ।
प्रत्येक शब्द सही तर अपूर्ण छ। यदि कुनै पदले मुक्तिलाई पूर्ण रूपमा वर्णन गर्न सक्दछ भने, बाइबलले त्यो पद भर प्रयोग गर्‍यो। तर ती सबै चित्र हुन्, प्रत्येकले उद्धारको एक खास पक्ष वर्णन गर्दछ - तर यी सर्तहरू मध्ये कुनै पनि पूरै चित्र वर्णन गर्दैन। जब परमेश्वरले मण्डलीलाई सुसमाचार प्रचार गर्न निर्देशन दिनुहुन्थ्यो, उहाँले हामीलाई "परमेश्वरको राज्य" भन्ने शव्द प्रयोग गर्न प्रतिबन्धित गर्नुभएन। प्रेषितहरूले येशूका भाषणहरू अरामीबाट ग्रीकमा अनुवाद गरे र उनीहरूलाई अन्य चित्रहरूमा, विशेष गरी रूपकमा अनुवाद गरे जुन गैर-यहूदी श्रोताको लागि महत्त्वपूर्ण थियो। म्याथियस, मार्कस र लुकास अक्सर "साम्राज्य" भन्ने शव्द प्रयोग गर्दछन्। जोन र प्रेषितहरू पनि हाम्रो भविष्य वर्णन गर्दछन्, तर ती चित्रण गर्न अन्य छविहरू प्रयोग गर्छन्।
मुक्ति [मुक्ति] एक बरु सामान्य शब्द हो। पावलले भने कि हामी मुक्ति पाएका छौं (एफिसी २:)), हामी मुक्ति पाउनेछौं (२ कोरिन्थी २:१५), र हामी मुक्ति पाउनेछौं (रोमी ५:))। भगवानले हामीलाई मुक्ति दिनुभएको छ र उहाँ हामीलाई विश्वास द्वारा उहाँलाई प्रतिक्रिया गर्न को लागी आशा गर्नुहुन्छ। यूहन्नाले मुक्ति र अनन्त जीवन को बारे मा एक वर्तमान वास्तविकता, एक कब्जा (१ यूहन्ना ५: ११-१२), र आशिष को बारे मा लेखे।
मुक्ति र परमेश्वरको परिवार जस्ता रूपकहरू - साथै परमेश्वरको राज्य - वैध छन्, यद्यपि ती केवल हाम्रो लागि परमेश्वरको योजनाको आंशिक वर्णन मात्र हुन्। ख्रीष्टको सुसमाचारलाई राज्यको सुसमाचार, मुक्तिको सुसमाचार, अनुग्रहको सुसमाचार, परमेश्वरको सुसमाचार, अनन्त जीवनको सुसमाचार इत्यादि भनेर वर्णन गर्न सकिन्छ। सुसमाचार हामी घोषणा गर्दछौं कि हामी परमेश्वरसँग सँधै बाँच्न सक्छौं, र यसले हाम्रो मुक्तिदाता येशू ख्रीष्टमार्फत गर्न सकिन्छ भन्ने जानकारी समावेश गर्दछ।
जब येशूले परमेश्वरको राज्यको बारेमा बोल्नुभयो, उहाँले यसको भौतिक आशिष्izeहरुमा जोड दिनुभयो वा यसको कालक्रम स्पष्ट गर्नुभयो। यसको सट्टामा, उनले ध्यान दिए कि मानिसहरु लाई यसमा एक भाग को लागी के गर्नु पर्छ। कर उठाउनेहरु र वेश्याहरु भगवान को राज्य मा आउँछन्, येशू (मत्ती २१:३१) ले भन्नुभयो, र उनीहरु यो सुसमाचार मा विश्वास गरेर (v। ३२) र पिताको इच्छा (v। २-21,31-३१) गरेर गर्छन्। हामी भगवान को राज्य मा प्रवेश गर्छौं जब हामी विश्वास र वफादारी मा भगवान को जवाफ दिन्छौं।
मर्कूस १० मा, एक व्यक्ति अनन्त जीवनको हकदार हुन चाहन्थ्यो, र येशूले भन्नुभयो कि उसले आज्ञाहरु पालन गर्नु पर्छ (मर्कूस १०: १-10-१10,17)। येशूले अर्को आज्ञा जोड्नुभयो: उसले उसलाई स्वर्गमा रहेको धनको लागी उसको सबै सम्पत्ति त्याग्न आदेश दियो (पद २१)। येशूले चेलाहरुलाई टिप्पणी गर्नुभयो: "धनीहरु को लागी भगवान को राज्य मा प्रवेश गर्न कती गाह्रो हुनेछ!" (V. 19)। चेलाहरूले सोधे, "तब को बचाउन सकिन्छ?" (V. 21)। यस खण्डमा र लूका १:: १-23-३० मा समानान्तर मार्ग मा, धेरै सर्तहरु प्रयोग गरीन्छन् कि एउटै कुरा को संकेत गर्दछ: राज्य प्राप्त गर्नुहोस्, अनन्त जीवन को उत्तराधिकार, स्वर्ग मा धन जुटाउनुहोस्, परमेश्वरको राज्य मा प्रवेश गर्नुहोस्, मुक्ति पाउनुहोस्। जब येशूले भन्नुभयो, "मेरो पछि लाग" (v। २२), उही कुरा लाई संकेत गर्न को लागी एक फरक अभिव्यक्ति को उपयोग गरीयो: हामी येशू को लागी हाम्रो जीवन लाई निर्देशित गरेर परमेश्वरको राज्य मा प्रवेश।
लूका १२: 12,31१--34 मा येशूले औंल्याए कि थुप्रै अभिव्यक्तिहरू उस्तै छन्: परमेश्वरको राज्यको खोजी गर्नुहोस्, एउटा राज्य पाउनुहोस्, स्वर्गमा धनसम्पत्ति पाउनुहोस्, भौतिक सम्पत्तिमा भरोसा त्याग्नुहोस्। हामी येशूको शिक्षालाई स्वीकारेर परमेश्वरको राज्य खोजी गर्छौं। लूका २१:२:21,28 र In० मा परमेश्वरको राज्य मुक्तिसँग बराबर छ। प्रेरित २०:२२ मा। २-30-२20,22। We२ हामी सिक्छौं कि पावलले राज्यको सुसमाचार प्रचार गरे, र उनले परमेश्वरको अनुग्रह र विश्वासको सुसमाचार प्रचार गरे। राज्य मुक्तिसँग नजिकको सम्बन्ध छ - राज्यको प्रचार गर्न लायक हुने थिएन यदि हामी यसमा भाग लिन सक्दैनौं, र हामी केवल विश्वास, पश्चात्ताप, र अनुग्रहको माध्यमबाट प्रवेश गर्न सक्दछौं, त्यसैले तिनीहरू परमेश्वरको राज्यको बारेमा प्रत्येक सन्देशको अंश हुन्। मुक्ति एक वर्तमान वास्तविकता साथै भविष्यको आशिष् को एक प्रतिज्ञा हो।
कोरिन्थमा पावलले ख्रीष्ट र उहाँको क्रूसमा झुण्डिएको बाहेक अरु केही प्रचार गरेनन् (१ कोरिन्थी २: २)। प्रेरित २ 1:२३, २:: ३१ मा लूकाले पावललाई रोममा परमेश्वरको राज्य र येशूको बारेमा र मुक्तिको बारेमा प्रचार गरेको बताउँछन्। यी एउटै ईसाई सन्देश को फरक पक्षहरु हुन्।
परमेश्वरको राज्य प्रासंगिक छ केवल यो मात्र हाम्रो भावी इनाम होईन, बरु यसले यस युगमा हामी कसरी बाँचिरहेका छौं र सोच्दछौं भनेर पनि असर पार्दछ। हामी राजाको शिक्षा अनुरूप अहिले बास गर्दै परमेश्वरको भविष्यको राज्यको लागि तयारी गर्दैछौं। जब हामी विश्वासमा बाँचिरहेका हुन्छौं, हामी परमेश्वरको शासनलाई हाम्रो आफ्नै अनुभवमा वर्तमान वास्तविकताका रूपमा चिन्छौं, र हामी भविष्यमा विश्वासको आशा गर्छौं जब राज्य सत्य हुनेछ जब पृथ्वी प्रभुको ज्ञानले पूर्ण हुनेछ।